Home Wararka Saadaq Joon oo lagu abaal mariyay kursi ka mid Baarlabaanka JFS
Saadaq Joon oo lagu abaal mariyay kursi ka mid Baarlabaanka JFS
Taliyihii hore ciidamada Booliska Gobolka Banaadir ayaa Saadaq Cumar Xasan (Joon) ayaa maanta la guddoonsiiyey shahaadda musharaxnimo ee Kursiga HOP248 oo Berri Doorashadiid ka dhcii doonto magaalada dhuusamareeb.
Guddoomiyaha guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Galmudug Maxamed Daahir Guuleed ayaa shahaadooyinka musharaxnimada xildhibaan gudoonsiiyey Jeneraal Saadaq Cumar Xasan (Saadaq John) iyo muhsarax la tartami doona o lagu magacaabo Cabdullahi Xersi Diirshe.
Kursiga HOP248 waxaa hor ugu fadhiyey Maxamed Axmed Abtidoon, laakiin waxaa looga reebay markii Aqalka Sare loo wareejiyey qoondadii beeshiisa.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa taageero siinaya Jen. Saadaq Joon oo la hubo inuu kusoo bixi doono Doorashada Kursiga HOP248.
Previous articleFahad & Farmaajo oo markale jebiyay heshiiskii Doorashada ciidamana u diray B/Weyne
Next articleWasiirka Arrimaha Gudaha oo si adag uga hadlay Ciidamada la geeyay Beledwayne
Wasiir ka tirsan Galmudug oo lagu xiray Magaalada Dhuusamareeb
[Sawiro] Dowladda Farmaajo oo heshiis kaalmo ciidan weydiisatay Ruushka